इतिहासका पाठहरु सिक्नको लागि हुन, बेच्नका लागि होइनन् | Infomala
– माधव सापकोटा
जनसंपर्क समितिको चुनाव नजिकिंदै गर्दा दिदी र भाई चुनाव लड्ने साइत जुरेको छ, बेल्जियममा । भाईले ढिपी झिक्यो छाडि दिउँ न त भनेर दिदीले ठुलो मन बनाए पनि हुनेथ्यो ! मैले दिदीको अविभावकत्वमा बसेर घर चलाऊन सिक्छु नि दिदी भनेर जुम्लि हात जोड्दा पनि ‘हैट !’ भन्ने दिदीलाई छोडि दिएपनी हुनेथ्यो ! अरुले पनि त्यसरी नै सोच्दा हुन सायद । तर खै यो पटक किन हो किन इतिहास सम्झन मन लाग्यो र महाभारतमा एकलब्यको बुढी औंला काटिएको दृश्यले मलाई चुनावमा आउन वाध्य बनायो । उमेरमा कान्छो हुँदैमा अभिमन्यूको बलिदानलाई कमजोर भन्न मिल्ला र ? म घोत्लिएँ । सोचें- दिदी उमेरले अग्रज भए पनि अन्ततः सहकर्मी त हौं हामी ।
म पनि चाहनाबिहिन मान्छे त हैन । संगठन विभाजनको बेला एउटा महाप्रलय भयो, को कता बास बस्यो त्यसको आधारमा मुल्याङ्कन गर्नु अस्वाभाबिक हो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यो बेला पनि म हालका पार्टी सभापति सम्मानित शेरबहादुर देउवा तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई संगै थिए । बि.स. ०५१ सालको असहजता पार्टी जीवनको एउटा भवितव्य थियो । बहुमतको आफ्नो प्रिय नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार गिराउनु नेतृत्वको गम्भिर भूल थियो भन्ने लाग्छ अझै पनि । त्यहि नै पछि बिभाजनको कारण बन्यो । जुन कुरा ईतिहास बनी सकेको छ र त्यसबाट सिक्ने पाठ मात्रै हो । त्यसलाई मुल्याङ्कनको कसी बनाउन खोज्नु अहिलेको हाम्रो नेतृत्व प्रति कै अपमान हुन आउछ । त्यसैले भनिन्छ इतिहाँसबाट सिक्न सकिन्छ तर बेच्न खोज्नु महापाप हो । त्यस्तै त्यस्तै बिषयबस्तुलाई समेटेर मैले इतिहाँसको प्रारम्भमा पार्टी कसरी र कस्तो अवस्थामा बन्यो ? बलिदान र त्याग के हो ? र oहाम्रो परिवेश कस्तो छ ? हामी कहाँ छौं ? भन्ने बारे केही हरफ कोर्ने प्रयास गरेको छु । त्रुटिलाई माफ गरी दिनु होला ।
विसं २००४ को भाद्रमा बीपीलाई रिहा गरियो। विसं २००४ को फाल्गुण २० देखि २२ सम्म बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको दोस्रो अधिवेशन भयो। त्यसले बीपी कोइरालालाई सभापति छान्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस विरोध र संघर्षको प्रतीक सशक्त राजनीतिक पार्टी भएर देशको प्रत्येक भागमा पुगिसकेको थियो। सबै सीमावर्ती स्थानमा यसको शाखा कार्यालय थिए। विसं २००५ को कार्तिकमा बीपी भूमिगतरूपमा काठमाडौं आउनुभयो। केहीपछि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। उहाँलाई अत्यन्त क्रूरताका साथ एक्लै नेल र हतकडी लगाएर अस्वस्थकर कोठामा राखिएको थियो। केही महिनापछि उहाँले आमरण अनसन सुरु गर्नुभयो। अनसनको २९ औं दिनमा मृत्युको मुखैमा पुगेपछि मात्र उहाँलाई २००६ को जेठ १५ गते रिहा गरियो। उहाँ जेलमै रहेको बेला २००५ को फाल्गुण १८, १९ र २० मा दरभङ्गामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तेस्रो अधिवेशन भयो। त्यसले बीपीलाइ यथाशीघ्र रिहा नगरे २००६ को जेठ १८ देखि सत्याग्रह गर्ने निर्णयसहित अरू विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्यो। सोहि अधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीको सभापति छान्यो। त्यसबेला भारतमा रहेका सुवर्णशम्शेर, महावीरशम्शेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्रविक्रम शाह लगायत राणा शासनको विरोधमा संगठन तयार पार्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। बीपीले उहाँहरूसित भेटेर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा सम्मिलित हुन विशेष आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस अहिंसात्मक मर्यादालाई पूर्णतः पालन गर्ने पार्टी थियो। तर कुनै नियम र कानुनको परिधिभित्र नरहेको नेपालको निरंकुश हुकुमी शासनको विरोधमा अहिंसात्मक कार्यविधि सर्वथा अनुपयुक्त हुन्छ। त्यसको विरोधमा सशस्त्र संघर्ष गर्नसक्ने संगठनको आवश्यकता छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। त्यसैले उहाँहरू नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा सम्मिलित हुनुभएन। विसं २००५ मा उहाँहरूले एउटा बेग्लै पार्टी ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ को गठन गर्नु भयो। यसको केन्द्रीय कार्यालय, फ्री स्कूल स्ट्रीट कलकत्तामा र अरू विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय राखिए। वि.सं. २००६ को मध्यतिर आइपुग्दा बीपी र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अरू नेताले पनि राणाहरूको कठोर निरंकुशता, तिनको बर्बरता र पाशविक व्यवहारलाई नजिकैबाट देखिसक्नु भएको थियो। उहाँहरू सबैलाई राणातन्त्रको विरोधमा अहिंसात्मक पद्धति उपयुक्त हुनसक्तैन भन्ने महसुस हुनथालेको थियो। यसले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको सम्बन्धलाई नजिक पार्दै लग्यो। यी दुई पार्टीका नेता मुख्यतः बीपी र सुवर्णका बीचमा अनेकपटक छलफल र विचार विमर्श भयो। अन्ततः १९५० को अप्रिल ९ अर्थात् २००६ को चैत्र २७ गते कलकत्ताको टाइगर सिनेमा भवनमा यी दुवै पार्टीको प्रतिनिधिको संयुक्त अधिवेशन भयो। त्यही अधिवेशनले यी दुई पार्टीको विधिवत् एकीकरण गरेर ‘नेपाली कांग्रेस’ को गठन गर्यो। यसको सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइराला र महामन्त्रीमा महेन्द्रविक्रम शाह हुनुभयो। दुवै पार्टीबाट चारचार जना केन्द्रीय सदस्य रहने निर्णयअनुसार, यसको सदस्यमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र दयाशंकर मुन्सी तथा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबाट सुवर्ण शम्शेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीर शम्शेर र कुँवर कल्लु सिंह रहनु भयो। नेपाली कांग्रेसले नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको झन्डालाई नै स्वीकार गर्यो । दुई बेग्लाबेग्लै पार्टीको आ-आफ्नो अस्तित्व कायम राखेर ‘नेपाली कांग्रेसको गठन भएको थियो। तर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना र यसको इतिहाससँगै नेपाली कांग्रेसलाई आबद्ध गरियो र एकीकरण अधिवेशनलाई चौथो अधिवेशन मानेर २००३ को माघ १२ लाई नै नेपाली कांग्रेसको स्थापनाको ऐतिहासिक दिन मानियो। नेपाली कांग्रेसको २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिले देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो।
– सापकोटा जनसंपर्क समिति बेल्जियमको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको प्रत्याशी हुन् ।
Previous Postबेल्जियम पासपोर्टवालालाई अमेरिका प्रवेशमा अग्रिम भिसा ?
Next Postसशस्त्र समूह र विप्लव माओवादी नै चुनावमा सुरक्षा खतरा
Post category:प्रमुख समाचार / विचार